Taariikhda My Butros » Maxaa Ma rabtaa in Haweenka xiriir?
Maxaa Ma rabtaa in Haweenka xiriir?
Sida laga soo xigtay Daraasad sameeyay in 2012, 41% guurka koowaad, 60% guurka labaad iyo 73% guurka saddexaad ee dhamaadka United States ee furiinka. Kuwani waa tiro dhab ahaantii naxdinta leh oo muujinaya in ragga iyo dumarka ee Maraykanka ayaa ku fakareysa in ay leeyihiin cilaaqaad adag. Wixii xiriir ay ku xoog badan, Labada qof waa in la fahmo baahiyaha qofka kale si fiican u. Sidaas, Halkaan waxaa ah waxyaabo gaar ah haweenka u raadiyaan in xiriir.
Jacaylka: Waxaa laga yaabaa inaad ka fekerayso mid ma u baahan tahay in qof dumar ah ay u raadiyaan jacaylka, laakiin ma uu horay u socdo ayaa laga yaabaa oo aan sheegin “jeclahay” sida haweenka oo kaliya jecel in ay dareemaan jecel. Taas micnaheedu ma aha in qof dumar ah oo uu doonayo ninka nolosheeda si ay u soo bandhigay dadweynaha of Jacayl ay si joogta ah, laakiin kaliya ay u dooneyso in ay soo bandhigto jacaylkii uu iyada u xeelad falalkii iyo erayada sida joogta ah sida ugu macquulsan; bandhigay dadweynaha marmarna Jacayl aanay sidaa u xumeyn ama. Sidaas, haddii aad tahay nin, si ay u ilaaliyaan bond xoog badan leh dumar aad u jecel yihiin, waa in aad sii iyada oo xasuusi inta aad iyada jecel ereyadooda iyo falalka.
Ammaanka: Safarku wuxuu nolosha uma sahlana qof, iyadoo aan loo eegin jinsigooda, laakiin haweenka safarka ah inta badan waa xitaa adag. Waxay u badan tahay in ay la kulmaan arrimaha ammaanka kala duwan ku dhawaad ​​dhan iyada oo ay nolosha, waa qayb wayn oo ka mid ah kaas oo la xiriira galmada.
Dumarka ee Maraykanka, kadeedka galmada ma aha wax aan la aqoon. Telefoonka A qaran ahaan wakiil baadhitaan ku lug leh 612 dumarka waa-weyn oo la sameeyey bishii June, 2000 shaaca ka qaaday in ku dhawaad ​​dhan oo iyaga ka mid ah ayaa la kulmi jireen dhibaatayn wadada mar uun nolosha. Qiyaastii 87% haweenka American da'doodu u dhaxayso 18 iyo 64 sano ayaa la ogaaday in ay leeyihiin waayo-aragnimo u leeyihiin in lagu kadeeday by qariib ah lab.
Tani ixtimaalka sare ee is colaadin tago haweenka u sugneyn ammaanka. Sidaas, ay doonayaan lamaane ay si buuxda u aamini karaan. Dumarka u ooman yihiin Shuruko wax u ciyaari doonaa doorka Sokeeye kaamil ah iyo inay dareemaan amaan.
Sida nin hadii aad ku najaxdo samaynta xaaskaaga ka Aamin Noqoteen, aad dhawaan arki doonaan furitaanka ilaa aad si labada galmada iyo dareen. Tani waxay si toos ah uga dhigi doonaa bond u dhexeeya laba idinka mid xoogan.
Joke: Kaftanka waa mid aad muhiim u ah haweenka. Haweenka had iyo jeer raadiyaan rag la yara of dareen kaftan ie. Dad ku samayn kartaa qosleen. Sida laga soo xigtay sahan kuwaas oo ay qaadeen MarketTools Inc, 58% haweenku ay doonayaan wada-hawlgalayaasha ay u leeyihiin dareen kaftan. Sidaas, nin doonayo si loo sameeyo uu xaas faraxsan oo ka kooban waa in ay isku dayaan in ay uu wittiest fiican.
Ixtiraamka: Inkastoo aan la soo dhaafay waxa ay yihiin xusay, ixtiraam waa in jaaniska dhan waxa ugu muhiimsan in ay leeyihiin in xiriir in inta badan ee ay dumarka Maraykanka. Baadhitaanka ay MarketTools Inc shaaca ka qaaday in 84% ee ay dumarku u dareemaan in u xidhiidh si ay u guulaystaan, ixtiraam ka lammaanaha helaysaa waa mid aad u muhiim ah.
Waa in aad la yaaban “waxa ku saabsan muuqaalka jirka”? Haa, haweenka waxay jecel yihiin in ay nimankooda iyo la-hawlgalayaasheeda kuwa soo jiidasho, laakiin iyaga oo waa inuusan marna waa mid ka mid ah tayada ugu horeeya si ay u eegaan in nin.
Dharka Wixii Date A First